About Us - I-Huaian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd.
Uyemukelwa kwi-Jiangsu Huaian Junbao Hydraulic Machchan Co, Ltd. Senzelwe ngokukhethekile ukukhiqiza i-valve yokulawula ukugeleza kokuqondisa, i-valve yokuqondisa ye-hydraulic, i-valve yokulawula i-spool eningi, ingcindezi ephezulu ye-multi-port valve kanye nokunye. Singahlinzeka nge-P40 Series, P80 Series, RD5200 Series, SD WAVOIL Series, DCV Series, ZD Series, CDB Series nokunye kusuka ku-30L / min kuye ku-400L / min, Pressure range from 16Mpa to 50MPa and other flow flow ultra-high , imikhiqizo isetshenziswa kabanzi kwezolimo, ezokwakha, uphethiloli, kwezokudoba, ezimayini nakwezinye izimboni.
Sibe ngumholi embonini. Futhi sihlala sinikezela ekuklameni, ekucwaningeni, kukhiqiza imikhiqizo emisha ngokuya ngemakethe nezicelo zamakhasimende ethu.Imikhiqizo yethu isivele ithumele kwamanye amazwe eSoutheast Asia, Australia, Middle East, Africa naseLatin America kanye nokunye, nayo izitholele idumela elihle kulo mkhakha.
Sizoqhubeka nokwenza ngcono uhlelo lwethu lokuphathwa kwebhizinisi kanye nohlelo lwensiza lwentengiso lwangemva kokuthengisa, ukuze sikwazi ukuhlinzeka abathengi emhlabeni wonke umsebenzi ngama-valve we-spool angcono kakhulu namaphampu egiya, asekelwa yinkonzo yethu enhle kakhulu. Senza ngaso sonke isikhathi konke okusemandleni ethu ukufeza konke okufunwa amakhasimende ethu.
Singumthombo wakho ophelele wemikhiqizo esezingeni eliphezulu kanye nensizakalo esekwezixazululo amahora angama-24 ngosuku.